Ukutya Frozen Industry Alumin ...
I-Aluminium alloy guardrail isetyenziselwa ikakhulu ukukhusela icala leelori, iitreyila kunye nezithuthi zobunjineli.yimveliso ephezulu enobunzima bokukhanya, uzinzo olomeleleyo kunye nokumelana okunamandla kwerusi. Ingenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
Yenziwe ngealuminium alloy, ke inobunzima kwisinye kwisithathu nje ngentsimbi engenasici kunye nentsimbi.
Iinjini zinokugcina ngaphezulu kweepesenti ezingama-60 zamandla azo ngokuphakamisa amaqonga asebenzayo e-aluminium emoyeni.
Ikhululekile kumhlwa, ungcoliseko kunye nokurisayikilisha.
Le mveliso isebenzisa iiprofayili ze-aluminium eziphezulu. Iyakwazi ukujikeleza kwaye isonge kwi-trcuk.lt yonyango lwe-oxidation yomphezulu, intle kwaye inesisa, isiphumo se-antiskid silungile.
I-Aluminium alloy izinto ze-extrusion, akukho lula ukurusa, isombulule enye into yokuthambisa kwemozulu emanzi, ukujika kombala, njl. ukusetyenziswa kwepetroli.
I-MAXXHAUL 50218 i-Aluminium A-Isakhelo seTreyini yeeLwimi zeBhokisi
Umngxunya womngxunya-weAluminiyam yoLwimi lweTreyini yokuGcina isiXhobo seLori ngeLitshi yeTraki ye-Utv yokuPhakamisa-ukungangeni manzi -Ukuhlala ixesha elide- Izinto ezahlukeneyo-Uyilo oluDayiweyo lweDayimane-Kulula ukuLuthwala -Ukunyibilika ngokulula -Ukugqiba okuGudileyo
1.Aluminium pallet _materials yezixhobo zealuminium alloy, luphuhliso luhambelana neemfuno zesociet Inokuphinda isetyenziswe iphinde isetyenziswe kwakhona.
2. Dibana ngendalo eyahlukeneyo yokufaka isicelo, efanelekileyo necocekileyo, akukho lula ukuzalisa iibhaktheriya.
3. I-ht yemveliso ye-smg Ii-II9ht, kwaye i-Ioad idibana nezinto eziqulathe izinto ezikhoyo. Uthelekiso wlth stee | matena |, ubunzima beenkcukacha ezifanayo ezi-1s esinye kwisithathu sobunzima babo.
Ukuthathwa kwebhokisi yezixhobo
Brait BR302 Aluminium Isixhobo Box kuba ATV Yokugcina Iinkuphelostencils Ukuthathwa RV, 30 "L, Isilivere
Inkampani yethu inemigca emi-3 yealuminium yokuvelisa imveliso. Imveliso ephambili 6061, 6063, 6082 uthotho lwendawo enamacandelo amakhulu, icandelo elinobunzima beprofayili yealuminium. Iimveliso zeprofayili ze-aluminium zorhwebo zisetyenziswa kakhulu kwi-aerospace kunye nokuhamba, ukhuselo kunye nemikhosi, ukuthuthwa koololiwe, izinto zokwakha, kunye nomzi mveliso we-elektroniki, kwaye zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-30 nakwimimandla esehlabathini.
Iimveliso ezenziwe ipleyiti eqine onke amaphepha ealuminium. Ixesha lokugodola limalunga nemizuzu engama-20 ngokukhawuleza kunezinye izinto, eziphucula ukusebenza ngokukuko. Imveliso inokusebenza ngokusingqongileyo okuphezulu, izinto ezingasetyenziswayo zinokuphinda zisetyenziswe. Ukolula, ukucaciswa kwebhokisi yokuqhafaza kunye nemilinganiselo kungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
Ubunzima bokuKhanya, Buhle, imveliso ephezulu kunye noPhinda ubuye. Indawo yoGcino-bucala yokuGcina ukothuka
Isetyenziswa ikakhulu kumasifundisane wokufumana izinto kunye nokuhamba. It has anti-umhlwa kunye nokumelana lingonakali kunye nobomi nkonzo ingakumbi elide.